Google Pixel ဖုန်းတွေလိုမျိုး Seamless Update ပြုလုပ်နိုင်မယ့် OnePlus 6
26 May 2018 . 6:37 PM
Android ဖုန်းတွေမှာ System Update လုပ်မယ်ဆိုပြီး Update ကို Download ဆွဲပြီးတိုင်း ဖုန်းက Restart ကျသွားပြီး Update လုပ်ပြီးဖို့ကို အချိန် ၁၅ မိနစ်၊ နာရီဝက်လောက်ထိ စောင့်ဆိုင်းနေရတာကို ကြုံဖူးပါသလား?
Google Pixel Seamless Update
Google က အခုလိုမျိုး Update ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ Restart ကျသွားပြီး စောင့်ဆိုင်းနေရတာကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုဖြေရှင်းတာက Seamless Update ပြုလုပ်ပြီး ဖြေရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Update File ကို Download ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Restart ကျသွားပြီး Install ပြုလုပ်မှာမဟုတ်ပဲ တခါတည်း Install ပြုလုပ်နေပြီးတော့ Update ပြုလုပ်ပြီးမှ ပုံမှန်အတိုင်း Restart ချလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Google က အခုလိုမျိုး Update ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ Restart ကျတဲ့ကြာချိန်ကို Seamless Update စနစ်နဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့ပေမယ့် တစ်ခုအားနည်းချက်က Google Pixel ဖုန်းတွေနဲ့ Stock Android အသုံးပြုထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကလွဲရင် Support ပြုလုပ်ခြင်းမရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ OnePlus ကနေ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ OnePlus6စမတ်ဖုန်းက အခု Google ရဲ့ Seamless Update ကို Support ပြုလုပ်တဲ့ Stock Android အသုံးပြုတာမဟုတ်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် OnePlus6စမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် Update Download ဆွဲပြီးတိုင်း Install လုပ်ဖို့ Restart ကျသွားတာကို ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ OnePlus ကိုယ်တိုင်ကလည်း System Update တွေကို လျှင်မြန်စွာပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် OnePlus6ဟာလည်း အခု Seamless Update Feature နဲ့ System Update တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိလာဖို့ ရှိပါတယ်။
OnePlus6ဖုန်းက Google Pixel ဖုန်းတွေအပြင် Android P Beta Preview ကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။
Android ဖုနျးတှမှော System Update လုပျမယျဆိုပွီး Update ကို Download ဆှဲပွီးတိုငျး ဖုနျးက Restart ကသြှားပွီး Update လုပျပွီးဖို့ကို အခြိနျ ၁၅ မိနဈ၊ နာရီဝကျလောကျထိ စောငျ့ဆိုငျးနရေတာကို ကွုံဖူးပါသလား?
Google က အခုလိုမြိုး Update ပွုလုပျတဲ့အခြိနျမှာ Restart ကသြှားပွီး စောငျ့ဆိုငျးနရေတာကို ဖွရှေငျးပေးခဲ့ပွီးပဲဖွဈပါတယျ။ အခုလိုဖွရှေငျးတာက Seamless Update ပွုလုပျပွီး ဖွရှေငျးခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ Update File ကို Download ပွုလုပျပွီးတဲ့အခြိနျမှာ Restart ကသြှားပွီး Install ပွုလုပျမှာမဟုတျပဲ တခါတညျး Install ပွုလုပျနပွေီးတော့ Update ပွုလုပျပွီးမှ ပုံမှနျအတိုငျး Restart ခလြိုကျရုံပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Google က အခုလိုမြိုး Update ပွုလုပျတဲ့အခြိနျမှာ Restart ကတြဲ့ကွာခြိနျကို Seamless Update စနဈနဲ့ ဖွရှေငျးခဲ့ပမေယျ့ တဈခုအားနညျးခကျြက Google Pixel ဖုနျးတှနေဲ့ Stock Android အသုံးပွုထားတဲ့ စမတျဖုနျးတှကေလှဲရငျ Support ပွုလုပျခွငျးမရှိတာပဲဖွဈပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာတော့ OnePlus ကနေ နောကျဆုံးထှကျရှိထားတဲ့ OnePlus6စမတျဖုနျးက အခု Google ရဲ့ Seamless Update ကို Support ပွုလုပျတဲ့ Stock Android အသုံးပွုတာမဟုတျတဲ့ စမတျဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာပွီပဲဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီအတှကျ OnePlus6စမတျဖုနျးကို အသုံးပွုနတေယျဆိုရငျ Update Download ဆှဲပွီးတိုငျး Install လုပျဖို့ Restart ကသြှားတာကို ကွာမွငျ့စှာစောငျ့ဆိုငျးနရေတော့မှာမဟုတျပါဘူး။ OnePlus ကိုယျတိုငျကလညျး System Update တှကေို လြှငျမွနျစှာပေးနတေဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈတဲ့အတှကျ OnePlus6ဟာလညျး အခု Seamless Update Feature နဲ့ System Update တှကေို မွနျမွနျဆနျဆနျရရှိလာဖို့ ရှိပါတယျ။
OnePlus6ဖုနျးက Google Pixel ဖုနျးတှအေပွငျ Android P Beta Preview ကို အသုံးပွုနိုငျတဲ့ စမတျဖုနျးတဈခုလညျးဖွဈပါသေးတယျ။